Ady an-trano tsy misy farany, krizy politika efa ho lava, toekarena mitotongan-dava no mampalaza ny firenena nozanahan’ny Frantsay. Malala-tsaina kokoa ny Anglisy ary namela malalaka ireo zanataniny hisafidy ny paikadim-pampandrosoana nety taminy tsy narahina teritery sy baiko midina ary fitsabatsabahana sy fanambakana.
An-kilany kosa, ara-tantara, tsy sitrapon’ny Frantsay velively ny hanome fahafahana saingy voatery ka sarintsarim-pahaleovantena no nomeny. Miezaka nametraka ny olony hahafahany mifehy hatrany ny tany nozanahiny ny Frantsay ary tsy mikendry afa-tsy ny hanjakazaka sy hanao izay hahazoana harena. Izay mpitondra tsy azony fehezina dia hitadiavany fomba ambadika handrodanana azy toy ny nisy teto Madagasikara ny taona 2009. Vokatry ny fitsabahan’ny Frantsay dia korontana ny tany Côte d’Ivoire, miady an-trano any Gabon, mifanongana ny mpitondra any RDC Congo, Centrafrique… Ny Frantsay dia mametraka fifandraisana mafy amin’ny tafik’ireo firenena nozanahiny fahiny mba hahafahany mifehy azy bebe kokoa. Ny ankamaroan’ny orinasa amin’ireo firenena nozanahina dia an’ny teratany Frantsay. Tazonin’ny Frantsay ireo banky rehetra sy ireo sehatra saropady ao amin’ny firenena.Voazanaka mba hankato sy hanaiky ny Frantsay amin’ny ankapobeny ny toe-tsain’ireo zanataniny ary na ny rafi-pampianarana sy ny lalàmpanorenana aza dia ny an’i Frantsa ihany no natao “kôpi kôlé”. Eto Madagasikara, ohatra, dia sokajiana ho mahay na olona ambony izay mahay miteny Frantsay. Nambara fa tsara ny vokatra vahiny ary nohamavomavoina ny vita Malagasy.
Tsy mahodina ny toekareny ny Frantsay raha tsy misy ireo tany nozanahiny hangoronan-karena mba hanabontsinany ny harinkareny. Ny Anglisy kosa miezaka hatrany hitady fiaraha-miasa sy mifanohana ary mametraka ny kolontsain’ny famokarana sy ny fivoarana ary nampitainy tamin’ireo zanataniny izany. Miezaka misokatra sy mifampizara ny fahombiazany izy ireo. Porofon’izany ny famirapiratr’i Etazonia izay efa mpifehy izao tontolo izao, ny haavon’ny harinkaren’i Afrika Atsimo izay efa afaka mifampitaha amin’ny Eoropeanina, ny fidangan’ny harinkaren’i Maorisy izay manankarena avo 25 heny mitaha amin’i Madagasikara.